Aroos kasta oo arooska ayaa leh magaciisa iyo caadadiisa
Xiriirka Wedding Wedding Anniversary
Dhalashada qoyska waa dhacdo muhiim ah. Newlyweds maalintaas waxay u dabaaldegaan arooska "cagaaran", taas oo ah dhacdadii ugu horreysay ee nolosha qoyska. Laga soo bilaabo arooska "cagaaran", kuwa cusubi waxay xaq u leeyihiin inay nafta iyo naagta u yeedhaan.
Laga soo bilaabo dhalashada qoyska, sannadguurada arooska ayaa ku dhowaadaa fasaxa ugu weyn ee qoyska. Taariikhda guurinta arooska, labada isqaba waxay caadi ahaan bixiyaan hadiyado kale, xusuusnow bilowga xiriirkooda iyo daqiiqadaha ugu farxada badan ee noloshooda. Martiqaadka waa laguu martiqaadi karaa, ama ma aqbali kartid, laakiin kaliya ku fadhiiso jawi deggan oo raaxo leh isla markaana ku raaxeyso shirkad kale.
Si loogu dabaaldego sannad-guurada saxda ah, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado caadooyinka qadiimka ah, iyadoo saldhig u ah, sannad kasta oo arooska uu leeyahay magaca iyo caadooyinka.
Sannadka ugu horeeya ee nolosha isku dhafan ayaa duqsiyaya. Taariikhda koowaad ee arooska waxaa loo yaqaan "calico". Magaca ayaa ka yimid xaqiiqda ah in sanadka ugu horreeya ee nolosha, dhalinyarada loo isticmaalo in lagu daro nolol maalmeedka. Sannadka koowaad, labada isqaba waxay bixiyaan hadiyado kale oo astaamo ah - macaamiishooyin badan.
Arooska "alwaax" waa xaflad shan sano ah. Waxay calaamad u tahay awoodda hore ee ku filnaanta guurka iyo xasilloonida xiriirka lamaanaha. Dabcan, hadiyadaha ugu fiican ee sannad-guurada shan-sano ee arooska ayaa noqon doona alaab laga sameeyey alwaax: dahabka, farshaxanka, suxuunta.
Ka dib todoba sano oo ka mid ah nolosha qoyskaaga, waxaa la joogaa waqtigii lagu dabaaldegi lahaa arooska "naxaas". Maalintan, lammaaneyaasha waa in ay ku wareegsan yihiin lacag - lacagta sonkorta ah ee keena barwaaqo iyo barwaaqo. Waxaad ku siin kartaa boorso boorso leh. Lamaanayaasha isboortiga ee sanadkan waxay siiyaan siddooyin kale oo naxaas ah sida calaamad muujinaysa daacadnimadooda iyo jacayl xoog leh.
"Tin" arooska waxaa lagu dabaaldegaa siddeed sano laga bilaabo guurka. Xilligan, waxaa ugu wanaagsan in la siiyo xaaskaaga qalabka guriga ama maacuunta jikada.
Taariikhda 10aad ee arooska waxaa loogu yeeraa "arooska" pink ama, sida lagu dhawaaqo, maalinta dhalashada. Maalintaan waa in la gooyaa jacaylka. Qoysaska ugu yar ee bulshadeena casriga ahi waxay tallaabo ka qaadaan tobanka sano ee xiriirka. Maalin kasta ha ahaato xayawaanka kale, waxaad ku tidhaahdaa erayo naxariis leh oo muujiya jacaylka iyo daryeelkaaga waxkasta.
"Nikel" arooska waxaa lagu dabaaldegaa laba iyo toban sano iyo badh nolosha qoyska. Nickel wuxuu sheegay in nolosha qoyska ee dhalinyarada "gunters"! Hayso dabeecadahan xiriirka aad la leedahay sanado badan si aad u timaadid.
15 sano ka dib arooska, arooska "dhalada" ayaa loo dabaaldegaa. Glass - calaamad muujinaysa daahfurnaanta iyo caddaynta xiriirka lamaanaha. Sidaa awgeed, hadiyado loogu talagalay isqaba waa in lagu siiyaa oo keliya muraayadda: vases, suxuunta, qurxinta gudaha gudaha guriga, iwm.
Sannad-guuradii labaatanaad ee arooska waxaa lagu magacaabaa arooska "porcelain". Taariikhdaas waxaa lagu dabaaldegaa heer aad u weyn, oo loo yaqaano qaraabada dhow iyo saaxiibada. U adeegso miis weyn oo weyn. Maqaayada barafka waa inay ku taallaa miiska. Porcelain waa hadiyadii ugu fiicnayd fasaxan labadan lamaane.
Arooska "Silver" waxaa sidoo kale si ballaaran loo dabaaldegaa. In sanadguuradii 25aad ee nolol wadajir ah, lammaanuhu waa inay ku fariistaan ​​meel fadaraal ah miiska xafladaha, sida aroosadda iyo arooska. Sida calaamad muujinaysa jacaylkooda, waa inay kudhuubaan siddooyin lacag oo dahab ah.
Sannadka 30aad ee nolosha qoyska waa arooska "luul". Sanadkan gudihiisa, nin waa inuu siiyaa naagtiisa lafo ama hilqado.
Arooska "Polotnyannaya" ayaa lagu dabaaldegaa 35 sano guurada. Hadiyadii ugu fiicneyd sannad-guurada noocan oo kale ah - dharka sariirta, shukumaanada iyo walxaha kale ee dharka leh.
Arooska 40aad ayaa waxaa lagu magacaabaa arooska "ruby". Ninka ayaa taariikhda xusuusta u siinaya xaaskiisa oo qurux badan leh. Rubin, sidaad ogtahay, waa dhagaxa jacaylka iyo dareenka dareenka.
Arooska dahabiga ah, waa mid laga yaabo inuu yiraahdo, xaqiiqda dhabta ah ee nolosha qoyska, isagoo caddeeyay in jacaylka iyo isfahamka dhabta ah ee u dhaxeeya labada isqabta ay yihiin. Arooskan 50-sano jirka ah, guurkoodu wuxuu is-weydaarsadaa dahab cusub. Tani waa sababta oo ah gacmahooda ayaa isbeddelay, aroosyada arooska gaboobay mar dambe kuma xirna farahooda, iyo dahabiga arooska arooska ayaa gashanaa oo gaabisey waqti dheer. Aroosyada cusub ee arooska waxay u samaysteen labada lamaane si ay ugu noolaadaan dhimashadooda iyagoo dareenkooda soo cusboonaaday. Wax walbaa way kala tagi doonaan labadaas.
U dabaaldeg sannad-guurnimadaada nolol qoys oo farxad leh waligoodna iloobin iyaga. Tani waxay soo jiidataa jacaylka xiriirka, iyo dareemada - cusboonaysiinta iyo jaceylka.
Sida loo dabaaldego sannad-guuradii koowaad ee arooska
Sidee loo dabaaldegaa sannad-guuradii labaad ee arooska iyo hadiyadda hadiyaddeeda si ay u soo bandhigto qeybtii labaad
Sida loo dabaaldego arooska dahabka ah
Waa maxay aroosyada sanado badan?
Maxaa la siinayaa arooska agate?
Sida loo dabaaldego arooska lacagta
Horoscope by calaamadda jilitaanka ee sanadka
Sheekooyinka sawirada jilaa Irina Alferova
Sare kulul leh hilibka duqadda ah
Ksenia Borodin iyo Kurban Omarov ayaa lagu dhaleeceeyey qashinka
Diinta, akhlaaqda, farshaxanka sida qaab falsafadeed ee xaqiiqda
Liemka guriga laga sameeyo
Dhirta gudaha ee caafimaadka
Nikotiin iyo saameynta caafimaadka
Sidee loo doortaa faylka ciddiyaha?
Imtixaamida barashada cilmi nafsiga ilmaha
Qodobbada waxtarka leh saliidda hadhuudhka
Sababtoo ah horoscopes lies, ha kaamil ahaato oo iska horimaado midba midka kale
Sida loo dabaaldego sanadka cusub kaliya
Jelly laga bilaabo currant madow
Sida loo dajiyo hadafyada: Talooyin ka soo baxa buugaagta ugu wanaagsan ee ku saabsan is-horumarinta
Ciyaaryahanka kubada cagta Alexander Kerzhakov ayaa guursaday gabadhii dhageysiga
Kukiyada leh macaanka